Gabaygiisii Murdud Reebe wuxuu Maxamed ku tilmaamay inaan geeljire aaro u noqon karin raggii Dhulbahante ee dhawrka ahaa ee Habar Yoonis laysay.
Haddaba, xilli ku aadan 1948kii ayaa Ingiriisku shir u qabtay dhammaan degaanadii Soomaaliyeed ee xukunkiisii ku hoos jiray si uu u damiyo colaado u dhexeeyey qabaa’ilka Soomaaliyeed ee degaankaa ku dhaqan. Shirkaa waxaa isugu yimid hoggaan-dhaqameedyo badan oo ka kala socday, Ogaadeen, Dhulbahante, Isaaq iyo Warsangali. Waxaa ka mid ahaa ragga madashaa yimid Maxamed Cumar Dage oo ay gabayadiisii hore Dhulbahante gaadheen hase yeeshee ay qoonsadeen, halkii uu filayey hanbalyo iyo salaanna wax ka duwan oo uusan jeclaysan la soo gaadhsiiyey.
Sida la wariyey, waxaa dhinaca Dhulbahante laga keenay hadal dhammaadkiisu ahaa “Rag waanu laynay ee si kale ayuu Maxamed Cumar noo xistiyayaa oo uu libinta aan soo hoyinay uu u sheegi la’ayahay.” Hadalkaa ayaa Maxamed Cumar Dage dhibay oo hiil iyo abaabulkiisii uu qaadan waayey in wanaag mooyee wax kale loogu badalo. Haddaba, shirkii ayuu ka dhex kacay, faraskiisii suugaanta jeedladay.
Wuxuu Dhulbahante ku dhalliilay in guubaabadiisii diirin weyday, gabayadiisiina ay qoonsadeen, intii ay ka dhiidhiyi lahaayeen dulliga haysta. Sidaa haddii ay tahay, wuxuu gabayguba mudan yahay in oodda loo rogo maxaa yeelay wax wanaag ah oo laga gaadhayaa ma jiro, ayuu ku dooday. Maxamed wuxuu doodiisa u gudbiyey Daaroodka kale. Mar haddii Dhulbahante is dhaqaajin waayey, raggoodii u aari waayey, dhulkiisiina dhacsan waayey, waa in loo gacan dhaafaa oo Habar Yoonis rag maqaawiir ah laga laayaa, ayuu wax ku guubaabiyey. Harti ayuu si gooni ah ugu xil saaray aaraha raggii xulka ahaa ee Dhulbahante laga laayey. Wuxuu yidhi:
Mudaakarada geeraar hadday, mucurto kuu gayso
Marxalkaad u shegtiyo haddii, marinkii loo diido
Kol haddaad masaladaad tidhaa, loo miyirin waayo
Adoo maray Lillaahida haddii, eexo lagu moodo
Miyirdiin hadduu kugu qabsado, maansadaad tirisay
Murti iyo martabo loo xishiyo, muuno laga waaye
Murdud Reebe gabaygaan kal horre, uunka maqashiiyey
Een midhaha Daarood dhex dhigay, mucurtiduu reebay
Ee muunsanoowgiyo ahaa, hiil u mara xoorka
Een muqadimiintii la jaray, ugu muraaqooday
Gabaygaan Hartiga maaxiyiyo, Mudug raggii joogay
Gabaygaan u maakibay in loo, mudo masaalkooda
Martaan xidhanay Habar Yoonistii, murunku noo yiilay
Niman madaxyo weyn ahoo, muhindisoonaaya
Anigoo Macbuudbaw hayee, malag la doonaaya
Gabaygaan magaalada lahaa, meyd halaga qaado
Abtir lagama maydhiyo nimaad, mini wadaagtaane
Ficil waa musiibee intaan, gibil madoobaaday
Lagu maadsay goortaan lahaa, waa la murugoone
Gabaygaan manaabada lahaa, maqan ku raadcayso
Raggii aaro looguma maqnoo, waaba loomarag e
Malahay khasaaryeey sideen, ugu muraad seegay
Inay midigta qaadaan lawaa, miidha Habarwaaye
Milgihii Shirshooraan sugayn, muuno duul gob ahe
Mulkigii Garaad Faaraxoow, idinka maaroowye
Dadku magaca waw wada jiray, midhaha Daarood e
Jifadaase lala maadhi jiray, maydh la oloshaaye
Wax maqaanihii la gala baxay, maanta Reer Hagar e
Inuu miilo gabay Reer Cameey, maqal Ogaadeen e
Marwo jabbe markii lagu jarriyo, murankii qoolabe
Milgo xumo Bah Dahabaan lahaa, milicsan maayaane
Maxamuud Gureey iyo Bilow, malihii beenoowye
Mara-wenyta Reer Faaraxoow, deyse murankiiye
Mayal-qabad ka dhimay Reer Cigaal, meel uu joogaba e
Reer Maxamed muuniyo ka samir, magac wanaagiiye
Haweenkuba martoo laga furooy, mahad ku sheegtaane
Macbuudkii abuuriyo siddaa, Maalligow galaye
Wax la mid ah qabiil magag ahoo, miidha qaayibaye
Laga maarsay laba Muuse iyo, mohosho Reer Cawle
Warsangali u mari yaan Hartiga, gabalkii moogaane
Majeerteen u sheeg xaajadaa, waa mashaqo weyne
Kuwii ficilka maamuli ogaa, wada muhiibsiiya
Maxamuud Saleebaan u mari, madaxyo weyntiisa
Bal in ay dhabliga meeriyaan, aad u maqashiiya
 Murdud Reebe: gabaygiisa kan ka horreeyey ee ka kaca Ha’da maanso hooyaale gabay, halalka geeraarka
 Muqadimiintii la jaray: Rag dhawr ah oo Dhulbahante ah oo Habar Yoonis laysay. Waxaa ka mid ahaa Caaqil Cumar Cameey, Axmed Cige Sii’arag, Jaamac Cali Nuur iyo Haybe Axmed Kaar.
 Manaabo: dakano, dadka nimaan manaabo iga qabin, inaanan maagaynin waa kii Maxamuud Cali Beenaley lahaa
 Habarwaa: Magac kore oo Dhulbahante badankiisu ku arooro sida Shirshoore Habarwaa iyo Khaalid Habarwaa
 Shirshoore: Shirshoore Habarwaa. Oday Dhulbahante badankiisu ku abtirsado sida Qayaad, Faarax Garaad, Maxamuud Garaad, Xaamud Ugaas, Xasan Ugaas, Xuseen Ugaas iyo Maxamuud Ugaasba
 Garaad Faarax: Faarax Garaad (Bah Ararsame, Barkad iyo Axmed Garaad – Cali-geri, Reer Hagar iyo dhawr kale) Wuxuu meerisyadaa kore iyo kuwa dabasocda ku qeexayaa in dhammaan Dhulbahante duudsi iyo ceeb qaayibay laf laf dhaantana aanay ku jirin
 Mara-weyn: eray sarbeeb ah, Soomaaliduna ku tidhaahdo ninkii ay dumarka la simayso. Reer Faarax Hagar weeye nimanka uu ujeedo
 Mayal: gaashaanka kobta la qabto ee gacantu ka gasho ayey Soomaalidu mayal u taqaan. Mayal-qabad waa qof gaashaan-qaad ah ama dirir gali kara waxna ka keeni kara. Wuxuu ujeedaa nimankaa Dhulbahante inay maato yihiin oo aysan lahayn nin diriri kara. Mayalka waxaad ku xusuusataa meerisyadii Cabdullaahi Dhoodaan ee ahaa: Mayalkaan u hayniyo wax badan maalin dirireede, muruqbaan ku daafici jirriyo xoog mataano ahe
 Reer Cigaal: Reer Cigaal, Reer Faarax, Reer Hagar, Axmed Garaad, Faarax Garaad, Dhulbahante. Waa lafta ay Reer Faarax Hagar Samatar Baxnaan iyo Aadan-carabba kaga arooraan. Waxay kasii yihiin Samatar oo Reer Maxamed ah iyo Aadan-carab oo Reer Axmed ah
 Reer Maxamed: Reer Maxamed Cigaal. Waa lafta Samatar Baxnaan ahaa.
 Dhabli: Ceeb, dhabligaad qamlaynayso ee, laga qalaalyoodo waa kii Maxamuud-bidhiidh lahaa